January 16, 2021 - Online Hartha
January 16, 2021 by Online Hartha
ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်ပေါင်းတင်နည်းများ ၁။အသားအရေစိုပြေစေရန်ပေါင်းတင်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်‌အလယ်သား အနှစ်လေးတွေကို ဇွန်းနဲ့ခြစ်ယူပြီး ရလာတဲ့ ဂျယ်အနှစ်လေးတွေကို မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် သုံးဆယ်ခန့်ခြောက်သွေ့အောင်ထားပြီး ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ခန့်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အသားအရေ စိုပြေတင်းရင်းစေပြီး ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း အသားအရေ‌ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်း၊အသားအရေရောင်းရမ်းခြင်း များကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ၂။ဝက်ခြံအမာရွတ်နဲ့အမဲစက်အတွက်ပေါင်းတင်းနည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ဇွန်းနဲ့ခြစ်ယူပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး အစေ့ထုတ်ပြီးသားတစ်လုံးကို ဓားသန့်သန့်ဖြင့် နုတ်နုတ်ဆင်းပြီး ရလာသောအရည်ကို ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်နဲ့ဆတူရောပြီး သမအောင် မွှေနှောက်ပေးပါ။ ရလာသောအနှစ်အရည်ကို သန့်စင်ထားသောမျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်‌ခြောက်သွေ့အောင်ထားပြီး ကြက်သီးနွေးရေလေးနှင့်ဆေးချပါ။ တစ်ဖန်ရေအေးအေးလေးနှင့် ပြန်သစ်ကာ ‌ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသော တဘက်လေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွသုတ်ပေးပါ။ လိမ်းနေကျ toner, moisturizerလေးလိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ အက်စစ်ဓာတ်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေက ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမဲစက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ကု‌သပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်သန့်ရှင်းစေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်က အသားအရည်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်စိုပြေစေပြီး အသားအရေယောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေပါသည်။ ၃။ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်+ကြက်ဥအကာပေါင်းတင်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်နှစ်ဇွန်းကို … Read more
ဒူးနာတဲ့သူတှကေို ကိုယျခွငျးစာလို့တငျပေးလိုကျတာပါ (လကျတှေ့ ဒူးနာပြောကျဆေးနညျးတဈခုပါ)
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ် ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်…. ခြေသလုံးပုံပါနေလို့ကန်တော့ပါရှင်….ရှားစောင်းလက်ပတ် လက်တစ်ဝါးစာကို ဆူးတွေ လှီးထုတ်ပြီးအပြားလိုက်နှစ်ခြမ်းခြမ်းလိုက်ပါ …. ပြီးရင်မီးနွေးနွေးလေးကင်ပါ အပူခံနိုင်သလောက်ကင်ပြီးရင် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်းတင်ပါ ….. ပြီးရင်ရှားစောင်းလက်ပတ်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ပုံပါအတိုင်း ကြွပ်ကြွပ်အိပ် ကိုအနေတော်ညှပ်ပြီ အပြင်မှာပြန်ကပ်ထားပါ …. ပြီးရင် ကြွပ်ကြွပ်ကြိုးနဲ့မလျှော့မတင်းစီးပြီးထားပါ သွားစရာမရှိရင်တော့ နေလည်လဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ် ….. ညအိပ်ရာဝင်လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ် တစ်ညလုံးစည်းပြီးအိပ်လိုက် မနက်ကျတော့ပြန်ဖြေ နောက်ရက်ညအိပ်ရာဝင်တစ်ခါထပ်လုပ် အနာပေါ်မူတည်ပြီးပျောက်ပါမယ် …..ကျမတော့ ၃ ရက်ဆက်လုပ်တာနဲ့ခုပျောက်သွားပြီ ….. ခုတော့ချော်လဲထားတဲ့ ဘယ်ဖက်ဒူးကဒဏ်ကိုပြန်လုပ်ထားတာပါ … Read more
“ နောကျတဈခါ လူလာဖွဈရငျ ဒီအခှငျ့အရေးဘာမှမရှိ (ကောငျးလှနျးလို့ ကြျောမသှားပဲ ဖတျကွညျ့ပေးပါ) ”
“ နောက်တစ်ခါ လူလာဖြစ်ရင် ဒီအခွင့်အရေး ဘာမှမရှိ (ကောင်းလွန်းလို့ ကျော်မသွားဘဲ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ) ” ခုလူတွေ ရှေးကနဲ့စာရင် တော်တော်ရိုင်းလာယ်၊တော်တော်ဆိုးလာတယ်၊ သို.သော် နောက်လာမယ့်လူတွေနဲ.စာရင် ဒါတွေ တော်တော် တော်တယ်နော်။နောက် ပေါင်းရမယ့်လူတွေကလည်း ခုလို လူမျိုးခုလို ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ ဆုတ်ခေတ် နက်ဖြန်ခါ ဒီထက်ဆုတ်မယ်၊နောက်နေ့ ဒီထက်ဆုတ်မယ်။ တက်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ ၊ ဆုတ်ခေတ်၊ ဆုတ်တာက ရိုးရိုးဆုတ်တာ မဟုတ်ဘူး၊တလိမ့်လိမ့်ဆုတ်နေတာ၊ များများမဟုတ်ဘူး၊နောက်ထပ် နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်နေကြည့်၊ အဲဒီအခါ အခုလက်ရှိလူတွေကို ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။တစ်ဘ၀နဲ.ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ပြီးတော. ကျင့်နည်းကလည်း သာသနာနဲ့ကြုံမှ ၊ တို့က သာသနာရှိနေတုန်းတခြားရောက်နေရင် ဒီနည်းသည် တို့နဲ့မဆိုင်၊ သာသနာ တို့နဲ့မဆိုင် ဖြစ်သွားမယ်နော်။အရူပဘုံ၊ ရူပဘုံဆိုတဲ့ နေရာမျိုးတစ်ဖက်သတ်အကျင့်နဲ.ရောက်သွားရင်လည်းတို.သာသနာနဲ.လွဲမှာနော်၊သာသနာက နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်ပြီလေ၊ နောက်တစ်ခါလူလာဖြစ်ရင် ဒီသာသနာရှိမှာလား။နောက်တစ်ခါလူလာဖြစ် သာသနာကြုံဖို.တော်တော်ခက်မယ်။ကြုံတယ်ပဲထား … Read more
အချိုရည်အတုပြီးတော့ ကော်ဖီမစ်အတု ထုတ်တဲ့နေရာပါ ထပ်ဖမ်းမိ၊ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးထဲဖြစ်နေ မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံနှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ နေအိမ်နှစ်အိမ်၌ အားဖြည့်အချိုရည်နှင့် ကော်ဖီမစ်များ ထုတ်လုပ်ကာ အတုအပ ပြုလုပ်ရောင်းချလျှက်ရှိသည့် စက်ရုံနှင့် အလုပ်နေရာ နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဇန်နဝါရီ(၁၄)ရက် ညပိုင်းက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိပါတယ်။ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကုန်းတန်းကျေးရွာရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အမ်-၁၅၀ အားဖြည့်အချိုရည်နှင့် ဘာဒီ ကော်ဖီမစ်ထုပ် အတုပြုလုပ်နေသည်များကို ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့ပြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ ၆၂လမ်း၊ ၁၆လမ်းနှင့် ၁ရလမ်းကြားရှိ နေအိမ်၌လည်း အမ်-၁၅၀ အားဖြည့်အချိုရည်များ အတုပြုလုပ်နေသည်ကို ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ဟိုဘက်မှာက (ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကုန်းတန်းရွာဘက်) ကော်ဖီမစ်ထုတ်တဲ့ စက်ရုံ မိတာ။ ဒီဘက်မှာက အိမ်မှာ အချိုရည်လုပ်တာပေါ။ ပိုင်ရှင်က … Read more
ရာသီခှငျအလိုကျ ဆောငျထားရငျ ကံကောငျးစမေယျ့အဆောငျလေးတှေ
ရာသီခွင်တစ်ခုစီအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကံကောင်းစေမယ့် အဆောင်လေးတွေ လူတော်တော်များများက ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ အဆောင်လေးတွေ ဆောင်ထားရတာကို ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဟိုးရှေးအရင်က လူကြီးတွေကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ ဒီအလေ့အထလေးဟာ ဒီကနေ့ထိတိုင်အောင် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လိုက်နာနေကြဆဲပါနော်။ ဒီတော့ ရာသီခွင်တစ်ခုစီအတွက် ကံကောင်းစေပြီး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ရာသီခွင်အလိုက် ပစ္စည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Aries (March 20 – April 20) Aries ရာသီခွင်တွေ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားမှုနဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး သူတို့ဟာ ဘာမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ သူတို့နဲ့တူညီတဲ့ သော့ဟာ သူတို့အတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ အဆောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီခွင်တွေဟာ သော့လေးတစ်ချောင်း ဆောင်ထားခြင်းက ဘယ်လိုတံခါးပေါက်မဆို ဖွင့်နိုင်ပြီး ကံကောင်းခြင်းအခွင့်အလမ်းတွေ ဝင်ရောက်လာမယ့်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေပါတယ်။ Taurus (April 21 … Read more
၀ိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီ ဆိုသည်မှာ သိချင်တာလေးရှိလို့ မေးလျှောက်ပါရစေဘုရား။ဘာသာရေးကျမ်းစာတွေ အထူးသဖြင့် ဇာတ်တော်တွေမှာ ဝိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ရှုရပါသည်။ ၄င်းတို့သည် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ အတွင်းအဘယ်ဘုံဌာနတွင် နေထိုင်ကြပါသနည်း။ သူတို့အကြောင်းကိုလည်း သိချင်လှပါသည်ဘုရား။ဝေလင်းအောင် ၀ိဇ္ဇာ ၅မျိုး လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂဒီပနီကျမ်းမှာဝိဇ္ဇာငါးမျိုးပြတယ်။ ၁။ ဝေဒ၀ိဇ္ဇာ = ဗေဒင်လေးပုံ။ ၂။ မန္တဝိဇ္ဇာ = လက္ခဏာကျမ်း၊ နိမိတ်ကျမ်း၊ နက္ခတ်ကျမ်း၊ ဂါထာမန္တာန်ကျမ်း၊ ဆေးကျမ်းတွေ၊ ၃။ ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာ = အင်းဝိဇ္ဇာ၊ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ၊ သံဝိဇ္ဇ္ဇာတွေရဲ့အစီအရင်နဲ့ နတ်သိကြားတွေရဲ့တန်ခိုး၊ အဘိညာဉ် တန်ခိုးတွေလိုအစွမ်းထက်တဲ့တန်ခိုး။ ဒီတန်ခိုးက နတ်တွေထက်တောင်စွမ်းလို့ နတ်တွေမနာလိုဖြစ်တတ်သတဲ့။ ၄။ လောကိယဝိဇ္ဇာ = အဘိညာဉ်တန်ခိုး။ ဒီတန်ခိုးကို ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတဲ့နေရာ အချိန်အခါတွေမှာလည်းအချို့ရသေ့၊ ရဟန်းတွေရတယ်။ ၅။ အရိယဝိဇ္ဇာ … Read more
ရှေးဟောင်းဝယ်ယူသူတစ်ဦး တင်ထားသော ရှေးသုံး ဒင်္ဂါး၊ အလေးနှင့် ငွေစက္ကူများ ဈေးနှုန်း
ရှေးဟောင်း ဝယ်ယူသူ တစ်ဦး တင်ထားသော ရှေးသုံး ဒဂ်ါး၊ အလေးနှင့် ငွေစက္ကူများ ပေါက်ဈေး ကျန်းမာတော် မူကြပါစေခဗျာ။ ကျွန်တော်၏ သင်ရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများ ဖြစ်ကြသောဆရာ7ယောက်အား ဦးထိပ်ပန်လျက် ယနေ့မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ် နတ်တော် လဆန်း ၂ ရက်နေ့-ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ခရစ်နှစ် 16.12.2020 ရက်နေ့ မြန်မာပြည်တွင်းခေတ်စားနေသော ရှေးသုံးငွေစက္ကူ -ဒဂ်ါးနှင့် အလေးများရဲ့ ပေါက်ဈေး ကြမ်းခင်းများအား အနီးဆက်ဆုံး တင်ပြပါမည်။ မြန်မာ ငွေစက္ကူများ- ဒေါက်တာဘမော်=1ကျပ်တန် (ကြမ်းခင်း 1သိန်း)၊ ဒေါက်တာဘမော် =5 ကျပ် (ကြမ်းခင်း 1သိန်းခွဲ)၊ ဒေါက်တာဘမော် = 10ကျပ် (ကြမ်းခင်း2သိန်း)၊ ဒေါက်တာဘမော်= 100ကျပ် (ကြမ်းခင်း1သိန်း)၊ လှရှိန် … Read more
သိတဲ့သူ အလွန်နည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင်၊ငွေဝင် နိမိတ်များ
သိတဲ့သူ အလွန်နည်း နေသေးတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင်နိမိတ်များ ၁။အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင်မူ ငွေရအံ့။ ၂။ အိမ်ထဲ ပိတုန်းဝင်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ ၃။ အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။ ၄။အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။တင်လိုက်သည့်အလံ ပြန်လျှောကျမူ ဘေးတွေ့အံ့။ ၆။ ခွေးလက်ဆောင်ရမူ၊ အိမ်တွင် ခွေးလာနေမူ မိတ်ဆွေ ကောင်းရအံ့။ ၇။ ခွေးမဲလာ‌မူ ဥစ္စာပေးမည့် မိတ်ဆွေရအံ့။ ၈။ ခွေးဝါလာမူ ပျော်ရွှင်စေမည့် မိတ်ဆွေရအံ့။ ၆။ ခွေးဖြူလာနေမူ ချစ်ခင်ဖွယ် မိတ်ဆွေရအံ့။ ၇။ခရီးသွားစဉ် နွားနှင့်တိုးမူ အလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေအံ့။ ၈။အင်္ကျီပြောင်းပြန်ဝတ်မိမူ မထင်မှတ်ပဲ ငွေအမြောက်အမြားရအံ့။ ၉။အိမ်တွင် ကြောင်မဲလာနေမူ မိတ်ဆွေက သစ္စာဖောက်အံ့။ ၁၀။ ကကြောင်ဖြူ လာနေမူ … Read more
ရင်သားကင်ဆာဆိုလျှင် ဆေးနည်းလေး ရင်သား ကင်ဆာပျောက်သော မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး အမျိုးသမီးများအတွက်ငွေကုန်သက်သာသောရင်သားကင်ဆာပျောက်သော မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးမွေးရပ်မြေဒိုက်ဦးမြို့သို့အမေ့ထံကျွန်တော်အလည်တစ်ခေါက်သွားခဲ့ပါသည်။ အမေသည်ကျွန်တော့အားသားရယ်ငါ့သားfbသုံးတယ်ဆို အမေကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါလားသားရယ် ထိုအခါကျွန်တော်ကအမေရယ်သားအမိကြား မှာဒါတွေမလိုပါဘူးအမေခိုင်းချင်တာသာခိုင်းပါ ထိုအခါအမေကသားအမေဒို့မိန်းခလေးတွေဟာများသောအားဖြင့်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တာများတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်းကုန်းမှာအမေ့အသိတစ်ယောက်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တာပဲခူးဆေးရုံကိုသွားပြတာ ပဲခူးဆေးရုံကဆေးဝါးအပြည့်အစုံမရှိဘူးတဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို သွားပြအဲဒီမှာ ဓါတ်လည်းကင်တယ်ဆိုပြီးပဲခူးဆေးရုံမှပြန်လွတ်လိုက်လေသည်။ လူနာရှင်လဲ ငွေကြေးမတတ်နိူင်လို့ကျွန်းကုန်းသို့ပြန်လာတယ်။ တစ်နေ့မှာရှမ်းဆေးဆရာတစ်ယောက်သည်ကျွန်းကုန်းသို့ဆွေမျိုးများထံ အလည်လာရင်းထိုရင်သားကင်ဆာပျောက်အောင်လို့ဆေးနည်းလေးပေးခဲ့တယ်လေ။ ထို ဆေးနည်းမှာပန်းနေကြာကိုအမဲသားနှင့်ရောပြီးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်စားပါ ဆေးဗီးဆပ်ကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးထောင်းသောက်ပါ ရေနွေးကြမ်းသောက်တဲ့ပန်းကန်လုံးအသေးဖြင့်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ အမဲသားဟင်းနှင့်ဆေးဗီးဆပ်နှစ်မျိုးလုံးကိုနှစ်ပတ်ပြည့်အောင်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာလုံးဝပျောက်သွားပါလို့အမေကကျွန်တော့ကိုပြောပြသောကြောင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှများကိုလူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာသဖြင့်ဖြန့်ဝေရခြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းများကိုအစဉ်လေးစားလျှက် ကျွန်တော်မောင်ကျော်လတ် အပေါ်ပုံ ဆေးဗီးဆပ်ခေါ်ဗီးဆပ်ရွက် အောက်ပုံ ပန်းနေကြာခေါ်နေကြာအရိုင်း နေကြာပန်းနှင့်တူပါတယ်အပွင့်မှာအဝါရောင် အပွင့်သေးသေးလေးပါ ဒေသအလိုက် အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းလဲနိူင်ပါသည်…။ Unicode Version ရငျသားကငျဆာဆိုလြှငျ ဆေးနညျးလေး ရငျသား ကငျဆာပြောကျသော မွနျမာတိုငျးရငျးဆေး အမြိုးသမီးမြားအတှကျငှကေုနျသကျသာသောရငျသားကငျဆာပြောကျသော မွနျမာတိုငျးရငျးဆေးမှေးရပျမွဒေိုကျဦးမွို့သို့အမထေံ့ကြှနျတျောအလညျတဈခေါကျသှားခဲ့ပါသညျ။ အမသေညျကြှနျတော့အားသားရယျငါ့သားfbသုံးတယျဆို အမကေိုတဈခုလောကျကူညီပါလားသားရယျ ထိုအခါကြှနျတျောကအမရေယျသားအမိကွား မှာဒါတှမေလိုပါဘူးအမခေိုငျးခငျြတာသာခိုငျးပါ ထိုအခါအမကေသားအမဒေို့မိနျးခလေးတှဟောမြားသောအားဖွငျ့ရငျသားကငျဆာဖွဈတာမြားတယျ ဒါကွောငျ့ကြှနျးကုနျးမှာအမအေ့သိတဈယောကျရငျသားကငျဆာဖွဈတာပဲခူးဆေးရုံကိုသှားပွတာ ပဲခူးဆေးရုံကဆေးဝါးအပွညျ့အစုံမရှိဘူးတဲ့ရနျကုနျဆေးရုံကွီးကို သှားပွအဲဒီမှာ … Read more
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ကြွေကျတဲ့သရက်ရွက်ကို အမှိုက်ဟုယူဆနေကြသော်လည်း
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက သရက်ပင်က ကြွေကျတဲ့သရက်ရွက်ကို အမှိုက် ဟုယူဆနေကြသော်လည်း ရောဂါတော်များများအတွက် ဆေးဖက်ဝင်ပါသတဲ့။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်ဟာဒေါ်လာတွေကို မီးနဲ့ရှို့နေသူပါ ကိုယ်တွေဆီမှာအမှိုက်ရှုတ်လို့မီးရှို့နေရတဲ့သရက်ရွှက်ခြောက် သူတို့ဆီမှာတန်ဖိုးသိလို့တန်ဖို့ရှိနေလိုက်တာ…. 15.12.2020 အရမ်းကို အံ့ဩမိ ပါသည် ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံးးး ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာပေါများလှတဲ့ သရက်ရွက်( Mango Leave ) ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂အောင်စ ကို 13$ နဲ့ရောင်းနေတာတွေ့ရတော့ ဘာတွေကောင်းလဲဆို google ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါတယ် သူများတွေရောင်းနေတာ ကုန်ချောအဆင့်တောင်မဟုတ်ပါဖူးနော် သူများရောင်းတာထိုင်ဝယ်စားနေရမယ့် ခေတ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဖူး သရက်သီးအရွက်ဟာ သရက်သီးထက် အဟာရပိုများနေပါတယ် ဗီတာမင် အေ ဘီ စီနဲ့ antioxidant တွေကြွယ်ဝပါတယ် သရက်ရွက်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာ ရေနဲ့ပြုတ်၍ဖြစ်စေ အရွက်ကိုအမှုန့်ပြုလုပ်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သလို အရှေ့တောင်အာရှမှာချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပါတယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနေဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကိုထိန်းညိဖို့သောက်သုံးကြပါတယ် ဒါအပြင် … Read more